आर्थिक समृद्धि र स्वास्थ्य जीवनका लागि 'ड्रागन फल' - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ड्रागन फल मानिसका लागि गुणकारी,स्वादिष्ट र रोप्दा पनि सफा ,सुन्दर देखिने खाउँ खाउँ लाग्ने कतिपय ठाउँमा यसलाई पिताया अथवा पितानाया पनि भनिन्छ । यो झट्ट हेर्दा सिउँडी जस्तै देखिन्छ । मानव शरीरलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण तत्व ( अधिक क्यालोरी ) र धेरै प्रकारका औषधीय गुण यसमा पाइन्छ । यो असाध्यै रसिलो स्वादिष्ट, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता, शक्ति तथा ऊर्जा वृद्धि गर्न सक्ने सुपर पावर र सुपर पावर हाउस फलको रूपमा चितपरिचित रहेको छ । ड्रेगन फल सिउँडी ( क्याक्टस ) प्रजातिको एउटा बिरुवा हो । यसको वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरियस अनडाइटस हो
विश्वमा पाइने ड्रागन फल मध्ये तीन प्रजातिलाई विशेष खानका लागि योग्य फलका र रूपमा लिने गरिएको भेटिन्छ । दक्षिण र मध्य अमेरिकाबाट करिब दुईसय वर्ष पहिले यो फल एसियाको भियतनाममा भित्रिएको अनुमान छ । यसको फलको या यस्ता बोटबिरुवाहरू नागरिक स्तरबाट ल्याउन र लैजान प्राय अवैध कारोबारमा राखिने गरेको भेटिन्छ । त्यसैकारण यो विशेषगरि वैदेशिक सभा, सम्मेलन या निम्तो मान्न जानेहरूले मन पराएर सानो टुक्रा मागेर या सुटुक्क झिकेर या चोरेर आफ्नो ठुलो सुट्केसभित्र कपडामा लुकाएर ल्याएको हुनुपर्छ । बिस्तारै बिस्तारै उपलब्धताका आधारमा सेतो, रातो, हल्का पिङ्क र पहेँलो जातका ड्रेगन फलका बिरुवाहरू नेपालमा पनि भित्रिए । विश्वभर सेतो, रातो र हल्का रातो ( पिङ्क) जातका ड्रागन प्रयोग गरिन्छ ।
सेतो र रातो भन्दा पहेँलो अलि कम फल्छ तर पौष्टिक तत्त्व चाहिँ सबैको भन्दा बढी र हल्का बास्नादार हुने गर्छ । यसलाई फलफूलको रूपमा एसियामा पहिले भियतनाम र बिस्तारै मलेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा व्यवसायीक रूपमा खेती गर्न थालेको पनि लगभग दुई सय वर्ष लागिसक्यो होला । नेपालमा पनि वैदेशिक सभा सम्मेलनमा जाने फलफूल पारखीहरूले यसलाई सुटुक्कै लिएर आए र आफ्नो बगैँचामा सौखका लागि सजाए, फलाए र खाए ।
यो हेर्दा कस्तो देखिन्छ ?
सबै जातको ड्रागन फलको बोक्रा काँचो भएसम्म हरियो र पाक्न थालेपछि बिस्तारै रातोरातो र पहेँलो हुँदै जान्छ । पुरै रातो र पहेँलो देखिएपछि यो खानका लागि योग्य बन्छ । खादा यो मह जस्तो गुलियो, शीतल र मनलाई नै आनन्द दिने खालको हुन्छ । खान थालेपछि खान नपाएसम्म मन छट्पटी रहन्छ । यो फल मुखमा राखेपछि पेटको आन्द्रामा रहेसम्म शीतल र आनन्दले मन अर्कै दुनियाँमा प्रकृति सौन्दर्यमा मक्ख परेर घरपरिवार नै बिर्से जस्तो गरी शीतलता दिन्छ ।
सेतो र रातो ड्रागन फलको बोक्रा रातो हुन्छ तर फल चाहिँ सेतोको सेतै र रातो र पिङ्क रातोको रातो र पिङ्क नै हुन्छ तर पहेँलोको चाहिँ भित्र सेतो हुने गर्छ । भित्रको फलमा कालो तील भुर्र छरेको जस्तो देखिन्छ । यो ड्रागन फल हेर्दा अचम्मको देखिए जस्तै बिरुवा रोप्दा, गोडमेल गर्दा फुल्दा र फल लाग्दासम्म नै घरपरिवार, छिमेकी, पाहुना सबैलाई उसैतिर तानिरहने निकै आकर्षक र मोहित बनाउने बिरुवामा पर्दछ । सेतो फल लाग्ने प्रजातिको फुलेको कोपिलाको पत्र हल्का सेतो र हरियो, रातो फलको कोपिलाको पत्रको किनारको भागमा हल्का रातो वा गुलाफी हुन्छ ।
फल मात्रै होइन फुल पनि उत्तिकै गुणकारी छ । यसको फुल फुल्न लागेपछि बोटले धान्न नसक्ने गरी फुल्छ । यसरी अत्यधिक फुलेका सबै फुलहरूलाई बोटले थान्न नसक्ने अवस्था देखियो भने छाँटी दिनुपर्ने हुन सक्छ । चिचिल्ला देखिएपछि बिस्तारै यसको फुललाई बिस्तारै टिप्न सकिन्छ । यसरी टिपेको फुललाई हामीले तरकारी बनाएर सेवन गर्न सक्छौ । यसको फुल तथा फल चिनी अधिक भएका, उच्च तथा निम्न रक्तचाप, कब्जियत, क्यान्सर, मिर्गौला आदिका रोगीहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बालबालिका र सुत्केरी लगायत अन्य बिरामीका लागि अमृत समान फाइदाजनक हुने गर्छ । पाए र भेटे सबै नेपालीको जीवनलाई स्फूर्ति र स्वास्थ्य जीवन बनाउन वरदान हुनेछ ।
कस्तो ठाउँ यसका लागि उपयोगी होला त ?
नेपालको हकमा यसको खेतीको लागि योग्य जमिन तराईदेखि १५०० मिटर सम्मको उचाइमा लगाउन सकिन्छ । यसको लागि पानी नजम्ने, सेप नभएको पारीलो जमिन उपयुक्त हुन्छ । यो कालो, रातो, दोमट, फुस्रो, बलौटे, चिम्ट्याइलो, गेगरयुक्त, ढ्ङ्ग्यान जस्तो सबै ठाउँमा फल्ने फल हो । पी एच मान ( PH.value ) ४,५-७.५ सम्म भएको माटोमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ४५ डिग्री सेल्सियस देखि २-३ डिग्री सम्म यसले सहन सक्छ । यसको लागि १५ देखि ३० डिग्री चाहिँ अति उत्तम तापक्रम हो । यसका लागि घाम लाग्ने रूखा, सुख्खा, पाखा, पखेरो, बगर, तराई, भित्री मधेस र पहाडका तेलहन र दलहन क्षेत्र पनि निकै उपयुक्त मानिन्छ । यसलाई घाम लाग्ने सहर भित्र हरेक घरका कौसी, करेसाबारी, खाली जमिन सबै ठाउँलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाएर लगाउन सक्यो भने वातावरणमा देखिएको प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ । यसलाई मौसम र वातावरणमा हुने उच्च परिवर्तन र उतार चढावले खासै असर गर्दैन । नेपालको हावापानी ड्रागन फलका लागि निकै उत्तम देखिन्छ । अहिलेसम्म उत्पादन भएका ड्रेगन फलहरू मध्ये नेपालका ड्रागन फल रसिला, स्वादिला शीतलता दिने निकै मिठा छन् ।
यसका फाइदा के के छन् त ?
ड्रागन फल एन्टिअक्सडेन्टको प्रमुख श्रोत मानिन्छ । यसमा पानी प्रशस्त मात्रामा हुने गर्छ । विश्वमा पाइने अरू अनेक प्रकारका एक दर्जन फलहरूमा भन्दा बढी तत्त्व या पोषण यसमा पाइन्छ । यसको बीउमा ओमेगा ३ र ६, गुदीमा भिटामिन सी र छालाका लागि चाहिने तत्त्व पाइन्छ । यसको फल डेङ्गो, सुगर लगायतका बिरामीहरूका लागि जीवन नै वरदान पाए जस्तो हुनेगरि फाइदा गर्छ । प्रशस्त फाइबर भएकोले पाचन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँछ । यसमा भएको फोनोइन्टस भन्ने तत्वले मुटु सम्बन्धी रोग लाग्न दिँदैन । क्याल्सियम प्रशस्त पाइने हुनाले दाँत र हड्डी बलियो बनाउँछ । गर्वअवस्थाका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोगले दु:ख दिइरहनेहरूको लागि शक्तिवर्दक सञ्जीवनी साबित हुन्छ । अर्थराइटिसका बिरामीका लागि निकै उपयोगी र सौन्दर्यको श्रोतको रूपमा उपयोगी हुने फलको नाम नै ड्रेगन फल हो ।
अहिले हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र दिगो विकास’को नारालाई सार्थक बनाउन खोजिरहेका छौ । यस्तो बेलामा सरकारले यसको व्यवसायीक रूपमा खेती गर्न चाहनेलाई विशेष अनुदानको व्यवस्थापक गर्ने र प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नै घरको घाम लाग्ने छत, कोरेसा वारि, डाँडा पाखा, सुख्खा, उब्जनी नहुने, कम हुने, पानी नभएका ठाउँहरू छानेर यसको खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने वास्तवमै मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन हुन सक्छ । थोरै उत्पादन गर्नेहरूको लागि घर-परिवारलाई खान पुगेर तरकारी खर्च थान्न सक्ने हुन्छ भने व्यवसाय गर्नेहरूले आफ्नो मात्रै होइन मुलुकको आम्दानीको श्रोत बढाउँछ र उत्पादित वस्तुको निर्यातमा सूचीकृत हुन सक्छ ।
यसको बजार व्यवस्थापन :
यसको खेतीमा लाग्नेहरूको जनजीवनमा न्यूनतम एक वर्षदेखि दुई वर्षको बिचमा उसको लगानी उठिसक्ने छ । न्यूनतम दशबोट लगाउन सके मात्रै पनि पाँच बोटको आफू र पाहुनालाई बाँकी पाँच घरको व्यवस्थापन गर्ने आम्दानी बन्न सक्छ । यसको बिरुवालाई मलजल पुग्यो भने एउटै एक केजी सम्मको फल बन्छ । यो काठमाडौँको हावापानी र तापक्रम मिलेको ठाउँमा तीन पटक र तराईको हावापानी र घाम पुगेको ठाउँमा वर्षमा पाँच पटकसम्म फलिरहन्छ । एउटा बोट राम्रोसँग झाँगिएको छ भने एक पटकमा पचास केजी सम्म फल लाग्छ ।
यो फलको बहुउपयोगी भएको कारण हाम्रै ससाना बजारले हजार कमाउँदै, रेस्टुरेन्ट, पाँचतारे होटेल, सपिङ कम्पेलेसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म नै सजिलैसँग जान सक्छ । हिजो सुटुक्क या चोरेर ल्याउनेहरूले सौखका लागि या राम्रो लागेर आफ्ना लागि ल्याए तर अब हामी अभियानका रूपमा सबैले रोपौँ ! आफू खाऊ र स्वस्थ बनौँ अनि दुनियाँलाई सर्वोत्तम फल निर्यात गरेर विश्व बजारमा नेपालको नाम चम्काऊ । यसको खेतीका लागि आजैदेखि परिवारका सबैलाई उत्प्रेरित गरौँ । सबैलाई ड्रागन फल लगाउने, घर सजाउने र जीवन सम्वृद बनाउन शुभकामना !!!
– सीता ओझा
एजेन्सी । संसारभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोराेना ...